ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားရှငျ၏ ခွဖေဝါးတျောတှငျ ပါရှိသညျ့ (၁၀၈) ကှကျစကျလက်ခဏာတျောမြား အကွောငျး – Youth Bar
မွတျစှာဘုရား၏ ခွဖေဝါးတျောနှဈပွငျ၌ (၁၀၈) ကှကျစီသော စကျလက်ခဏာတို့သညျ ထငျကုနျ၏။ ထို(၁၀၈)ကှကျသော လက်ခဏာတျောတို့သညျ လောကသုံးပါးကို သရုပျဖျေါ၍ တညျကုနျ၏။
၄ (၁၀၈) ကှကျတို့တှငျ ဩကာသလောကကို သရုပျဖျေါ၍ အကှကျပေါငျး (၅၉) ကှကျ၊ သတ်တလောကကို သရုပျဖျော၍ (၂၁) ကှကျနှငျ့ သင်ျခါရလောကကို သရုပျဖျေါ၍ (၂၈) ကှကျရှိကုနျ၏။
သဘောကား လောကသုံးပါး သညျ မွတျစှာဘုရား၏ ခွတေျော၌ ရှိသညျ။ မွတျစှာဘုရားသညျ လောကသုံးပါးထကျ မွငျ့မွတျသညျဟု ဆိုလိုသညျ။ ထို လက်ခဏာတို့သညျ ဖှါးတျောမူခါစကပငျ ပါရှိလသေညျ။
တဈရာ့ရှဈယောကျကုနျ သော ပုဏ်ဏားတို့အနကျ ရှဈဦးတို့သညျ ဘုရားလောငျး သူငယျ၏ မွတျသော လက်ခဏာတျော၏ ပွညျ့စုံခွငျးကို ကွညျ့၍ ပထမပုဏ်ဏား ခုနှဈဦးမှစ၍ ဘုရား သျောလညျးကောငျး၊
စွင်ျကာမငျး သျောလညျးကောငျး ဖွဈမညျဟု ဆိုကုနျ၏။ ကောဏ်ဍညနှယျဖှါး သုဒတ်တ ပုဏ်ဏားငယျ တဈဦးတညျးမှ “ဘုရားစငျစဈဖွဈလတ်တံ့ ” ဟု တဈခှနျးတညျး ဟောဆိုသညျ။
အကွောငျးမှာ..ဘုရားလောငျး၏ ခွတေျောပွငျ လက်ခဏာ အစဉျဝယျ စွင်ျကာမငျးပုံ ပါလသေညျ။ စွင်ျကာမငျးထကျ မွတျသညျကား လောကသုံးပါးတှငျ “ဘုရား ” သာလြှငျ ရှိပသေတညျး။
ထို့ကွောငျ့ ဤ လက်ခဏာ (၁၀၈) ပါးကို ဖူးမွငျရာတှငျ မွတျစှာဘုရား၏ တိလောကဂ်ဂ လောကသုံးပါးထကျ မွငျ့မွတျသောဂုဏျ တိလောကန်ဓဂူ လောကသုံးပါးမှ လှနျမွောကျတျောမူသော ဂုဏျနှငျ့လောကဝိဒူ လောကသုံးပါးကို အကွှငျးမရှိ သိတျောမူသော ဂုဏျတျောတို့ကို နှလုံးသှငျး၍ ဖူးမွငျကွကုနျရာသတညျး။
“ (၁၀၈) ကှကျသော ရုပျပုံမြား” ၁။- လှံမ၊ ၂။- အိမျမှနျ ၃။- ဇလပျပနျး၊ ၄။- လညျရေးသုံးဆငျ့၊ ၅။- ဦးဆောကျပနျး၊ ၆။ ထမငျးပှဲ ၊ ရ။ အငျပြဥ၊ျ ၈။ ခြှနျးတောငျးလကျနကျ၊ ၉။ ပွသာဒျ၊ ၁၀ ။
၂၀။ ကွာညို ၊ ၂၁။ ကွာနီ ၊ ၂၂။ ပဒုမ်မာကွာ၊ ၂၃။ ကွာဖွူ ၊ ၂၄။ ကွာပုဏ်ဏားရိတျ၊ ၂၅။ ပွညျ့သောအိုး ၊ ၂၆။ ပွညျ့သောဖလား ၊ ၂၇။ သမုဒ်ဒရာ၊
၂၈။- စွင်ျကာဝဠာတောငျ၊ ၂၉။ ဟိမဝန်တာတောငျ၊ ၃၀။ မရေုတောငျ၊ ၃၁။ နဝေနျး ၊ ၃၂။ လဝနျး ၊ ၃၃။ နက်ခတျတာရာမြား၊ ၃၄။ ဇဗ်ဗုဒိပျကြှနျး(တောငျကြှနျး) ၃၅။ အရှကြေှ့နျး၊ ၃၆။
မွောကျကြှနျး၊ ၃၇။ အနောကျကြှနျး၊ ၃၈။ ကြှနျးငယျနှဈထောငျ၊ ၃၉။ စွင်ျကာမငျး၊ ၄၀။ ခရုသငျး ၊ ၄၁။ ရှငေါးကွငျး အစုံ၊ ၄၂။ စဈလကျနကျ၊ ၄၃။ သီတာခုနှဈတနျ၊
ကလောသတောငျ၊ ၆၉။ ခွင်ျသမေ့ငျး၊ ရဝ။ ကြားမငျး၊ ရ၁။ ဝလာဟကမွငျးမငျး၊ ရ၂။ ဥပေါသထ၊ ရ၃၊ နဂါးမငျး၊ ရ၄။ ဟင်ျသာမငျး၊ ရ၅။ ဥသဘနှားမငျး၊ ရ၆။ ဧရာဝဏျဆငျမငျး၊ ရ၇။ ရှမေကာရျး၊ ရ၈။ မုချလေးခုနှငျ့ရှလှေေ၊ ရ၉။ နို့စို့သားအမိ၊ ၈၀။ ကိန်ဒရာဖို၊ ၈၁။ ကိန်ဒရီမ၊
၈၉။ နတျပွညျခွောကျထပျ၊ ၉၀။ နတျပွညျခွောကျထပျ၊ ၉၁။ နတျပွညျခွောကျထပျ၊ ၉၂။ နတျပွညျခွောကျထပျ၊ ၉၃။ ဗွဟ်မာတဈဆယျ့ခွောကျဘုံ၊ ၉၄။ ဗွဟ်မာတဈဆယျ့ခွောကျဘုံ၊ ၉၅။ ဗွဟ်မာတဈဆယျ့ခွောကျဘုံ၊ ၉၆။ ဗွဟ်မာတဈဆယျ့ခွောကျဘုံ၊ ၉၇။ ဗွဟ်မာတဈဆယျ့ခွောကျဘုံ၊ ၉၈။ ဗွဟ်မာတဈဆယျ့ခွောကျဘုံ၊
၉၉။ ဗွဟ်မာတဈဆယျ့ခွောကျဘုံ၊ ၁၀၀။ ဗွဟ်မာတဈဆယျ့ခွောကျဘုံ၊ ၁၀၁။ ဗွဟ်မာတဈဆယျ့ခွောကျဘုံ၊ ၁၀၂။ ဗွဟ်မာတဈဆယျ့ခွောကျဘုံ၊ ၁၀၃။ ဗွဟ်မာတဈဆယျ့ခွောကျဘုံ၊ ၁၀၄။
ဗွဟ်မာတဈဆယျ့ခွောကျဘုံ၊ ၁၀၅။ ဗွဟ်မာတဈဆယျ့ခွောကျဘုံ၊ ၁၀၆။ ဗွဟ်မာတဈဆယျ့ခွောကျဘုံ၊ ၁၀၇။ ဗွဟ်မာတဈဆယျ့ခွောကျဘုံ၊ ၁၀၈။ ဗွဟ်မာတဈဆယျ့ခွောကျဘုံ.
(လေးစားမှုဖွငျ့ ခရကျဒဈ)- ဗုဒ်ဓကမ်ဘာ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ခြေဖဝါးတော်တွင် ပါရှိသည့် (၁၀၈) ကွက်စက်လက္ခဏာတော်များ အကြောင်း
မြတ်စွာဘုရား၏ ခြေဖဝါးတော်နှစ်ပြင်၌ (၁၀၈) ကွက်စီသော စက်လက္ခဏာတို့သည် ထင်ကုန်၏။ ထို(၁၀၈)ကွက်သော လက္ခဏာတော်တို့သည် လောကသုံးပါးကို သရုပ်ဖေါ်၍ တည်ကုန်၏။
၄ (၁၀၈) ကွက်တို့တွင် ဩကာသလောကကို သရုပ်ဖေါ်၍ အကွက်ပေါင်း (၅၉) ကွက်၊ သတ္တလောကကို သရုပ်ဖော်၍ (၂၁) ကွက်နှင့် သင်္ခါရလောကကို သရုပ်ဖေါ်၍ (၂၈) ကွက်ရှိကုန်၏။
သဘောကား လောကသုံးပါး သည် မြတ်စွာဘုရား၏ ခြေတော်၌ ရှိသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် လောကသုံးပါးထက် မြင့်မြတ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထို လက္ခဏာတို့သည် ဖွါးတော်မူခါစကပင် ပါရှိလေသည်။
တစ်ရာ့ရှစ်ယောက်ကုန် သော ပုဏ္ဏားတို့အနက် ရှစ်ဦးတို့သည် ဘုရားလောင်း သူငယ်၏ မြတ်သော လက္ခဏာတော်၏ ပြည့်စုံခြင်းကို ကြည့်၍ ပထမပုဏ္ဏား ခုနှစ်ဦးမှစ၍ ဘုရား သော်လည်းကောင်း၊
စြင်္ကာမင်း သော်လည်းကောင်း ဖြစ်မည်ဟု ဆိုကုန်၏။ ကောဏ္ဍညနွယ်ဖွါး သုဒတ္တ ပုဏ္ဏားငယ် တစ်ဦးတည်းမှ “ဘုရားစင်စစ်ဖြစ်လတ္တံ့ ” ဟု တစ်ခွန်းတည်း ဟောဆိုသည်။
အကြောင်းမှာ..ဘုရားလောင်း၏ ခြေတော်ပြင် လက္ခဏာ အစဉ်ဝယ် စြင်္ကာမင်းပုံ ပါလေသည်။ စြင်္ကာမင်းထက် မြတ်သည်ကား လောကသုံးပါးတွင် “ဘုရား ” သာလျှင် ရှိပေသတည်း။
ထို့ကြောင့် ဤ လက္ခဏာ (၁၀၈) ပါးကို ဖူးမြင်ရာတွင် မြတ်စွာဘုရား၏ တိလောကဂ္ဂ လောကသုံးပါးထက် မြင့်မြတ်သောဂုဏ် တိလောကန္ဓဂူ လောကသုံးပါးမှ လွန်မြောက်တော်မူသော ဂုဏ်နှင့်လောကဝိဒူ လောကသုံးပါးကို အကြွင်းမရှိ သိတော်မူသော ဂုဏ်တော်တို့ကို နှလုံးသွင်း၍ ဖူးမြင်ကြကုန်ရာသတည်း။
“ (၁၀၈) ကွက်သော ရုပ်ပုံများ” ၁။- လှံမ၊ ၂။- အိမ်မွန် ၃။- ဇလပ်ပန်း၊ ၄။- လည်ရေးသုံးဆင့်၊ ၅။- ဦးဆောက်ပန်း၊ ၆။ ထမင်းပွဲ ၊ ရ။ အင်ပျဥ၊် ၈။ ချွန်းတောင်းလက်နက်၊ ၉။ ပြသာဒ်၊ ၁၀ ။
တုရိုက်တိုင်၊ ၁၁ ။ ထီးဖြူ ၊ ၁၂။ သံလျှက၊် ၁၃ ။ ထန်းရွက်ယပ်၊ ၁၄ ။ ဥဒေါင်းမြီးစီးယပ်၊ ၁၅ ။ စာမရီယပ၊် ၁၆ ။ သင်းကျစ် ၊ ၁၇ ။ ပတ္တမြား၊ ၁၈။ သပိတ်၊ ၁၉။ မုလေးပန်းဆိုင်း၊
၂၀။ ကြာညို ၊ ၂၁။ ကြာနီ ၊ ၂၂။ ပဒုမ္မာကြာ၊ ၂၃။ ကြာဖြူ ၊ ၂၄။ ကြာပုဏ္ဏားရိတ်၊ ၂၅။ ပြည့်သောအိုး ၊ ၂၆။ ပြည့်သောဖလား ၊ ၂၇။ သမုဒ္ဒရာ၊
၂၈။- စြင်္ကာဝဠာတောင်၊ ၂၉။ ဟိမဝန္တာတောင်၊ ၃၀။ မေရုတောင်၊ ၃၁။ နေဝန်း ၊ ၃၂။ လဝန်း ၊ ၃၃။ နက္ခတ်တာရာများ၊ ၃၄။ ဇဗ္ဗုဒိပ်ကျွန်း(တောင်ကျွန်း) ၃၅။ အရှေ့ကျွန်း၊ ၃၆။
မြောက်ကျွန်း၊ ၃၇။ အနောက်ကျွန်း၊ ၃၈။ ကျွန်းငယ်နှစ်ထောင်၊ ၃၉။ စြင်္ကာမင်း၊ ၄၀။ ခရုသင်း ၊ ၄၁။ ရွှေငါးကြင်း အစုံ၊ ၄၂။ စစ်လက်နက်၊ ၄၃။ သီတာခုနှစ်တန်၊
၄၄။ သီတာခုနှစ်တန်၊ ၄၅။ သီတာခုနှစ်တန်၊ ၄၆။ သီတာခုနှစ်တန်၊ ၄၇။ သီတာခုနှစ်တန်၊ ၄၈။ သီတာခုနှစ်တန်၊ ၄၉။ သီတာခုနှစ်တန်၊ ၅၀။ တောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်၊
၅၁။ တောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်၊ ၅၂။ တောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်၊ ၅၃။ တောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်၊ ၅၄။ တောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်၊၅၅။- တောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်၊ ၅၆။တောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်၊ ၅၇။ အိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်၊ ၅၈။ အိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်၊ ၅၉။ အိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်၊
၆၀။ အိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်၊ ၆၁။ အိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်၊ ၆၂။ အိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်၊ ၆၃။ အိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်၊ ၆၄။ ဂဠုန်မင်း၊ ၆၅။ မိကျောင်းမင်း၊ ၆၆။ တံခွန်ကုက္ကား၊ ၆၇။ ရွှေထမ်းစင်၊ ၆၈။
ကေလာသတောင်၊ ၆၉။ ခြင်္သေ့မင်း၊ ရဝ။ ကျားမင်း၊ ရ၁။ ဝလာဟကမြင်းမင်း၊ ရ၂။ ဥပေါသထ၊ ရ၃၊ နဂါးမင်း၊ ရ၄။ ဟင်္သာမင်း၊ ရ၅။ ဥသဘနွားမင်း၊ ရ၆။ ဧရာဝဏ်ဆင်မင်း၊ ရ၇။ ရွှေမကာရ်း၊ ရ၈။ မုခ်လေးခုနှင့်ရွှေလှေ၊ ရ၉။ နို့စို့သားအမိ၊ ၈၀။ ကိန္ဒရာဖို၊ ၈၁။ ကိန္ဒရီမ၊
၈၂။- ကရဝိတ်ငှက်မင်း၊ ၈၃။ ဥဒေါင်းငှက်မင်း၊ ၈၄။ ကြိုးကြာငှက်၊ ၈၅။ စက္ကဝတ်ငှက်မင်း၊ ၈၆။ ဇီဝဇိုးငှက်မင်း၊ ၈၇။ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်၊ ၈၈။ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်၊
၈၉။ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်၊ ၉၀။ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်၊ ၉၁။ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်၊ ၉၂။ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်၊ ၉၃။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊ ၉၄။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊ ၉၅။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊ ၉၆။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊ ၉၇။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊ ၉၈။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊
၉၉။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊ ၁၀၀။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊ ၁၀၁။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊ ၁၀၂။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊ ၁၀၃။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊ ၁၀၄။
ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊ ၁၀၅။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊ ၁၀၆။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊ ၁၀၇။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊ ၁၀၈။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ.
(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ခြောက်ထပ်ကြီး ဘုရားမှ မှတ်တမ်းယူ ရေးသားပါသည်။)
(လေးစားမှုဖြင့် ခရက်ဒစ်)- ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ